NISA oo kala shaki xooggan uu ka dhex billowday. – Hornafrik Media Network
NISA oo kala shaki xooggan uu ka dhex billowday.
By HornAfrik	 On Jun 27, 2017
Hay’adda Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo ahayd Hay’adda u xilsaaran Illaalinta Sirta Qaranka iyo Raadinta Xogta iyo Macluumaadka qatarta ku ah Amniga iyo Jiritaanka Qaranka Soomaaliyeed ayaa iyadii noqotay mid ku filnaan waysay inay illaashato Macluumaadkeeda. Waxaana joogto noqday Macluumaadka NISA ee lagu faafinayo meel walba oo ay ku jirto Warbaahinta.
Arrintan ayaa walaac iyo kala shaki ka dhex abuurtay Saraakiisha iyo Madaxda NISA, iyadoona uu Agaasimaha Hay’adda ku eedeeyay Madaxa Kaalinta Taliyaha oo ah halka laga maamulo Xogta Xafiiska Taliyaha inay ku guuldaraysteen illaalinta Sirta Xafiiskiisa, isla markaana Go’aanadda uu gaaro ay faafayaan inta uusan shaacin. Wuxuuna ku eedeeyay masuuliyadda Qaladaadka dhacay Maxamad Bukhaari oo ah Madaxa Xafiiskiisa, isagoo ku amray inuu ka soo jawaabo Eedaymaha loo jeedinayo iyo siday ku dhacday inuu Xakamayn waayo Xogta Xafiiska.
Bukhaari ayaa si uu arrintan isaga leexiyo waxa uu isna dusha ka saaray Qaladaadkii dhacay Shaqaalaha Xafiiska uu Madaxda ka yahay. Wuxuuna Shaqadda ka eryay 9 qof oo ka tirsanaa Kaalinta Taliyaha, kuwaasoo lagu eedeeyay inay Xogta Xafiiska u gudbiyeen meelo kale.
Shaqaalaha la eryay oo dhamaantood ka soo kala jeeda Hirshabelle iyo Galmudug ayaa la sheegay inay ku xiran yihiin Qabaa’iiladooda oo diidan siday wax u socdaan. Waxaana uu Bukhaari Warqadda uu Shaqadda kaga eryay u gudbiyay Taliyaha oo ku qancay arrintaasi, aqbalayna in Eedda loo haystay Bukhaari ay sabab u yihiin Shaqaalahan.
Waa Markii ugu horaysay ee Saraakiil NISA ka tirsan loo cayriyo Dambiyo aan la hayn Cadaymo. Waxaana Xeerka Hay’adda uu qabaa in haddii qof ka tirsan uu Xog gudbiyo in la xiro, loona Maxkamadeeyo, Laakiin Saraakiishan oo aan lagu hayn wax cad oo lagu xiro waxaa laga ruqseeyay Shaqadda, taasoo aan sharci ahaan meelna ka soo galin Nidaamka NISA.
Ciidamadda Dawladda oo ka cabanaya in looga been abuurtay Mushaaraad aan la siin.
Kenya oo ka mamnuucday Dalkeeda inuu soo galo Madaxa Sirdoonka NISA.